TIM News-Balaa Gadheetu Dho’uuf deemaa jira-Very Serious! | Kichuu
Posted on October 25, 2018 by kichuu_admin
#TIM News-Balaa Gadheetu Dho’uuf deemaa jira-Very Serious!
1. Waraanni mootummaa Wayyaanee lakkoofsaan kuma 10 ol ta’an lixa Oromiyaa qaqqabaniiru. Meeshaa waraanaa ammayyaa hundaan guutamanii #WBO barbadeessuuf bobba’aniiru. Hundumtuu walitti qophaa’eetu fiishkaa ishee xumuraa qofa afuufuutu hafe.
2. Mootummaan #Itoophiyaas hamma waraana kana hiiksiftanitti waajjira isiniif hinkenninu jechuun oogganoota #ABO abdii kuatchiiseera. #WBO hiikkachiisuun ammoo human ooggansaa ol ta’ee jira. Qeerroo Oromoo, Sabboontonniifi #WBO bosona keessaa waliigaluun akka hidhannoo hinhiikkanne lafa jala qophii xumuranii dhumuufis of qopheessaniiru. Knaaf WBO hidhannoo hin hiikakdhu jedhetti waraanni akka banamuu qabu mootummaa biyya bulchu biraa murtiin darbeera.
3. Namoota hidhannoo hiikkachuu dhabuutti amanan irratti dhiibbaan guddaan deemsifamaa jira. Mana hidhaatti kan darbatamaa jiranillee jiru. Qaamoota kamuu biratti sabboontonni ija keessa bu’anii hidhaaf abbalamaa jiran naannoo Finfinneefi magaalaawwan tokko tokko keessaa adda baafamaniiru.
4. Dhiibbaan #WBO’n haahiikkatu jedhuufi maqaan #ABO jedhu kana booda nu hinbarbaachisu jedhamanii warriin dhiibbaa shiraa yaalaa jiranis Aktiivistoota, Dhaabbilee siyaasaa dhihoo kana muudaman, diyaasfoorota dantaan sossobamanii biyya jiraniifi mootummaadha.
5. Akka qophii amma eegalamaa jiru kanaatti uummata baayyeetu dhumuuf jira. Oromoodhumatu Oromoo waraanaa jira. Loltoonni Oromoo dirqamanii #WBO bosona jira jedhamurratti waraana eegalaatti jiru. Karaa biraatiin ammo hiriira mormiifi FXG bifa haaraadhaan akka guutuu Oromiyaatti akka geggeeffamuuf Qeerroon qophii isaanii xumuranii jiru.
Oromoon hundi kanarratti yaadaa hojjedhaa!
Ibsa ejjennoo Marii hawasa magaalaa Naqamtee
Ibsa Ejjennoo qabxii 19 qabuufi Qophii FXG Qeerroo Bilisummaa~ Haalli deemamaa jiru yaaddessaadha! Biyyi abbaa dhabeera. Komiin uummataa kun 100% dhugaadha! Obsaan dhaggeeffadhaa!!!
Aktiivistoota Diyaasfooraa kanaa biyyatti dachaataniifi Kaadiroota OPDOF
Jireenyi isiniif mijate malee Oromoo hundaaf hinmijanne. Dhiigaafi lafee Qeerroofi Qarree keenya kaleessaatiin kan bashannanaa jiru isinidha. Akka bashannantaniif manni siniif kennameera; hootela babbareedaa keessa taa’aa jirtu. Lafas #Boolee iddoo kaareemeetiriin xiqqoon miliyoonaan hinargamne ramadamaa jirtu. Sana jechuun Qeerroof ifni ba’e jechuun miti. Qeerroon kaleessa qabsaa’aa ture, har’as beela‘aa, ajjeefamaa, buqqa’aafi reebamaa jira. Saba qabsaa’aataa jiru kana yeroo hirribarraa kaatanii quuftanii of wallaaltan FB as baatanii bishaan garaatti hinnaqiinaa. Qeerroon waan godhu beeka. Siniinuu bilisoomsee biyyaatti dachaaseetu mootumamas ana diigee kansaa ijaarrachuu dadhaba jettanii hinyaadiinaa.
Qeerroo hamma ofiin of bulchitutti qabsookee jabeessi!
Qeerroon akka keessan kana carraa Hooteloota keessa Nadheen fana bashannanuu hinarganne. Har’a yoo akaayii nyaate bor waan nyaatuuf yaadda’aa jira!
[SQ, Onkoloolessa 25,2018] #Qeerroo #Oromoo #ABO #WBO #QBO
Fincilli Guddaan Uummata Oromootiin Guyyaa Borii irraa jalqabee guutummaa Oromiyaatti nii gaggeeffama jedhamee eegama.
Roorroo hadhaa’aa keessuummeessaa, harka firaaf halagaa keessa eegaa, karaa kam naa darba jedhaa jiraataa kan ture uummatni Oromoo ammallee rakkinni irraa bu’uu didee du’aaf ajjeechaan akkasuma lafarraa buqqa’uun daangaan olitti irratti adeemaa jira.
Ilmaan Oromoo waan Oromoo ta’an qofaaf ajjeechaa deettii (jumulaan) araddaa isaniirratti ajjeefamaa turaniiru ammallee ajjeefamuutu dhaabbachuu dide. Kanatti daangaa godhuuf uummatni Oromoo dargaggeessa isaa jabeeffachuun Qeerroo waliin ta’ee falma isaa itti fufuuf murteeffate.
Haaluma kanaan guyyaa har’aa magaalaa Naqamtee keessatti haala Oromiyaa ammaa fala dhabiinsa roorroof gidiraa isarra gahu kan aarsee finiinse uummatni Oromoo dargaggoota isaa waliin bakkoota hedduutti mariirra ture.
Tooruma kanaan magaalaa Naqamtee keessatti uummatni ibsa ejjennoo qabxii 19, qabu walii dubbisuun gaddaaf gadadootti xumura gochuuf borirraa jechuun onkoloolessa 26,2018 qabee fincila guddaa akka gaggeessuu qabu murteeffate.
Haaluma wal fakkaatuun magaalaa Amboo keessattis fincilli guyyaa boruurraa qabee nii adeemsiifama jedhamee eegama. Wallagga aanaa Giddaa Ayyaanaa, Limmuu Galiilaa fi bakkootni biroonis guyyaa boruu fincila karaa nagaaf of qopheessuu isaanii beeksisan.
Fincilli kun kan paartii siyyaasaa kam irraayyuu bilisa ta’e kan uummatni ofiin roorroo isarra gahaa jiru ifatee gochuuf jiru ta’uus Qeerroon gabaase.
Dabalataan Qellem Wallaggaa fuulduraa kanatti jalqaba torbee dhufurraa qabee waamicha akka walii taasisaa jiru Qeerroon gabaase.
#Iyyaa!#Iyya!#Dabarsaa! Game is Over OPDO~TPLF =OPD~Ginbot 7
Ummatni Oromoo ammayyuu kallattii maraan ajjeefamaa fi buqqifamaa jira. Kaabaan Agaazi Tigireen, Kaaba-bahaatiin Agaazii fi Humna Addaa Afaariin, Lixaan Agaazii fi Humna Addaa Beneshaangul, Bahaa fi Kibbaan Agaazii fi Humna Addaa Somaalitiin ajeefamaa fi buqqifamaa jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa Mirga Oromoo eegsisuu hin dandeenye. Uumatni Oromoo hidhatee Falmachuu qaba.
Ka’i qeerroo!Ka’ii Qeerroo!!FXG Itti muddii!
“Erga jijjiiramni kun dhufee, dhaabbileen siyaasaa gara biyyaatti deebi’anii booda, Oromoota fi sabaaf sablammoota biroo arrabsuun heddummaate jira. Magaaloota adda addaa keessatti akka baranaatti oromoon arrabfamee hin beeku.
“Ilmaan G7 tii oromoo irratti duula bananii jiru. MM Abiy isaan ol qaqqabnaan kanaaf onnatanii dhaaba fi media adda addaa ijaarratanii uummatoota arrabsutti ka’anii jiru. Hiriiraa irrattis ifatti Oromoo arrabsaa jiru;arrabsaas turan.
“Kun itti yaadame irratti dalagamuu qaba. Namni Oromoo fi Oromumna gadi xiqqeesse, maqaa xureessee, adabbii malee nagaa dhan ta’uu, jiraachuu, akka hin dandeenye motummaanis, hawaasnis, namni dhuunfaanis, miidiyaanis, aktivistoonnis, hogganoonni motummaatis beekuu qaban.
“Miidiyoota Oromoo maqaa xureessaa oolan, dhaabbilee siyaasaa, aktivistoita waan akkanaa dalagan hunda track goonee saaxiluu qabna. Seerattis akka dhiyaatan gochuu qabna.
“Qeerroowwan fi ummanni keenya hundi bakka jirutti gantuu (yartuu) diinoota Oromoon Agaazi hidhate harka duwwaa dhaabatee isaanis bilisa baase biyyuma keenya keessa taa’anii oromoo salphisaa jiru.
“Dhaabbileen kan akka G7 Oromoo irratti duula gochaa jiran. Oromoo tuffachaa jiran. Bakka jirutti dura dhaabbachuun dirqama Qeerroowwan fi ummata guutuu oromiyaa ta’uu qaba.
“Qeerroo Amboo irraa!!!”
The OPDO is buying supporters with land.
The following people were given 1000 square meter of land from Bole.
1 Birhanemeskel Segni
2 Geresu Tufa
3 Taye Dandea
4 Milkessa Midhega
5 Dereje Gerefa
6 Kemal Gentu
7 Hailu Golfa
8 Abebe Garasu
QAMOONI MOTTUMMAA NAMOONI JIJIRAMA AKKA KAN GUFACHISUU FEDHU ILACHAA DIINUMMA UMMATTA OROMOOTIF QABAN ITTI FUFA JIRAN ============== Maqaa sakata’insa Bosona jedhuun waraanni WBO irratti aggamame nurra dhaabachuu qaba.sakata’insa kana sababeeffachuun loltuun mootummaa fi Meeshaaleen gurguddaan gara lixatti fe’ama jirus diina kam waraanuuf akka ta’e nu hin galuu.
Uummaanni oromoo rakkoo kaleetti deebi’uun nun fayyaaduus nuun
gammaachiisuus, tarii kan faayidaa irraa argaatujiraachuu mala.nuti akka oromootti kisaaraa yoo tahee malee faayidaa tokkoollee kan argaannuu hin qabnu.Lollii fi okkoorri deemu umurii mootummaa Gabroomsaa kana nurra dheeressuu danda’aa. maarree mootummaanis umurii isaa dheereffachuuf okkoraa fi Lola kana Hawwii fi fedhii guutuun itti adeemaa jira.garuu Lola kana injifachuuf osoo hin taane qabsoo Oromoo awwaaluuf ykn immoo humna qabsoo Oromoo laaffisuun umurii aangoo isaa dheereffachuuf tahuu hubaachuu qabdu.Dhimmaa waraana mootummaa lixaafi kallaatti adda addaatti bobbaahaa jiruu kana ilaalchisee, Oromoon sagalee isaa
dhageessisuun gaaffii isaa karaa sirrii taheen gaafachuun deebii argachuu fi qabsoo isaa tikfaachuu qaba. Kanaaf Qeerroo Bilisummaa Oromoo Ibsa yeroo ilaallatu baasuun waamiicha barbaachiisu
1. Hiriira fi gaaffii Seera qabeessa tahee dhiheessuun
waliigalteen ABO fi mootummaa gidduutti adeemsiifame karaa nagaa akka xumuraamu dhiibbaa taasiisuu qabna.
2. Murtee fi marii. Ertiraatti taasiisaan irraatti hundaa’uun akka karaa
nagaa fixaatan taasiisuu dirqaama.
3. Dhimmaa WBO fi qawwee murteessuu kan danda’uu
kan obboo Lammaan gooftaa keenya jedhaan uummaata Oromooti
waan taheef uummaanni Oromoo sagaalee isaa dhageessiifachuu
4. Sagaleen uummaata akka kabaajamu dhiibbaa taasiisuu. Fkn #fiichee#moyyaalee #dambiidoolloo #diilallaa‘aa, #naqaamtee # #Haroolimmui # galiilaa #shaambuu #abeedongoroo fi kkf irraa
muxaannoo fudhaachuun sagaalee ofii akka kabaajamu qabu mootummaatti agaarsiisuu.
5. Heeyyaama uummaata Oromoon alaatti waraanni
mootummaa sakaattaaf akka hin deemnee taasisuun mootummaan n
akka nagaaf tattaafatuuf dirqiisiisuu qabna.
6. Lollii WBO irraatti akeekamu kamiiyyuu harka mirgaa oromoo irraatti
badii aggaamame waan taheef dura dhaabbannee waraana keenyaaf
humna tahuu qabna.”
WBO Bosona Oromiyaa: Dhaloota qubee roorroon barnootarraa adda kuttee Bosonatti naqxe kanaan dinatu itti gargaarama jechuun cubbu guddaa keessa nama hingalchuu?
Toleeraa Adabaa: Hidhannoo hiikkachuu Waraana Bilisummaa Oromoo irratti ejjennoon ABO maali?
Hiriira mormii qeerroo godina adda-addaa keessati hara’a godhamaa olee